Hodges U Waxaa Loo Magacaabay 2020 Ugu Fiican Kuliyadaha Vets ee Waqtiga Milatariga
Jaamacadda Hodges Waxaa Loogu Magacdaray Kuwa Ugu Fiican Kuliyadaha Vets ee Waqtiga Milatariga ee 2020
Jaamacadda Hodges waxay daryeeshaa halyeeyadeenna wayna muujineysaa Waqtiga Milatariga wuxuu umuuqdaa inuu ogolaaday, xulashada Jaamacadda Hodges oo kamid ah 134 kuliyadood si loo sameeyo liiska ugu wanaagsan ee loogu talagalay Vets ee 2020. Waxaa intaa dheer, kani waa sanadkii saddexaad ee aan helno sharafkan qaaliga ah
Maxay Hodges ugu Fiican Tahay Vets?
Waxaan ku bixinnaa Xarumo Adeegyada Halyeeyga ah ee Dr. Peter Thomas Veterans Xarumaheena Naples iyo Fort Myers oo ay ka shaqeeyaan halyeeyo, halyeeyo.
Barnaamijyadeena shahaadada ayaa ah xoog shaqaale oo diirada saaraya shaqooyinka ay halyeeyo badani rabaan inay ku daba galaan.
Waxaan bixinaa taariikhaha bilawga koorsada billaha ah ee buuxiya jadwalka dalabaadka halyeeyada.
Meelaha gawaarida la dhigto ee khaaska ah ee loogu talagalay halyeeyadayada xarun kasta.
Si aad wax badan uga sii akhrisatid sababta Hodges U uu ugu Fiican yahay Vets, ka akhriso maqaalka oo dhan Toddobaadlaha Florida.
Jaamacadda Hodges, oo ah hay'ad gobol ahaan loo aqoonsan yahay, hay'ad samafal ah oo gaar loo leeyahay oo la aasaasay 1990, waxay ardayda u diyaarisaa inay ka faa'iideystaan ​​barashada sare shaqooyinkooda shaqsiyadeed, xirfadeed, iyo madaniga ah. Iyadoo in ka badan 10,000 oo qalin jabiyayaal ah oo leh boqolkiiba 93 boqolkiiba guusha sii socota ee xirfadaha, Hodges waxaa loo aqoonsan yahay horumarinta barnaamijyo si gaar ah loo qaabeeyey oo loo keenay inay u adeegaan dad kala duwan oo qaan gaar ah oo waxbarta. Iyada oo xarumo ku leh Naples iyo Fort Myers, Florida, Hodges waxay bixisaa maalin rogrogmi kara, fiidkii, iyo fasalo khadka tooska ah lagu barto oo ay dhigayaan kuliyado heer caalami ah oo shahaadada koowaad iyo heer jaamacadeed ah. Hodges sidoo kale waxaa loo qoondeeyey inuu yahay Hay'ad Isbaanish ah oo Adeeg u ah, wuxuuna xubin ka yahay Ururka Isbaanishka ee Kulliyadaha iyo Jaamacadaha (HACU). Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Jaamacadda Hodges waxaa laga heli karaa Hodges.edu.
Tags: kulliyadaha ugu fiican ee halyeeyada, HodgesU, Kuliyadaha Halyeeyada ah, Jaamacadaha Halyeeyada ah